हात्ती र मान्छेको द्वन्द्व कहिलेसम्म, झापामा पाँच वर्षयता २४ जनाको मृत्यु :: a1nepal.com.np
हात्ती र मान्छेको द्वन्द्व कहिलेसम्म, झापामा पाँच वर्षयता २४ जनाको मृत्यु
काँकडभिट्टा, २१ कात्तिक । पाँच वर्षयता जंगली हात्तीको आक्रमणबाट झापामा २४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयमा रहेको तथ्यांकअनुसार २०६९ सालयता मारिने आधाभन्दा बढी दक्षिण झापाकै छन् । भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तरी झापाको बाहुनडाँगीलाई हात्तीपीडित क्षेत्र’ मानिदै आए पनि पाँच वर्षमा यस्तो पीडा दक्षिण झापातिर सरेको छ ।
विवादमा मुछिएकी उपसभामुख तामाङ भन्छिन : मैले गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेकै छैन मास्कमाण्डुबाट काठमाण्डौं बनाउने ‘कडा लालबाबु’को यस्तो योजना कुन मोडमा पुग्यो एमाले-माओवादी एकता वार्ता ? दीपक मनांगे ज्यान मुद्धामा दोषी ठहर, पाँच वर्ष जेल सजाय प्रादेशिक राजधानीको चर्चासँगै जग्गाको भाउ आकाशियो सबैभन्दा बढी रसुवामा, सबैभन्दा कम रामेछापमा मतदान, कुन जिल्लामा कति मत खस्यो ? (सूचीसहित) यौन सम्बन्ध राख्न नमानेपछि युवतीको विभत्स हत्या नर्सलाई भोलेन्टियर राख्ने कार्य आजैबाट बन्द गरौं : स्वास्थ्यमन्त्री भूपूगोर्खा सैनिकहरुको गुनासो, भारतीय राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र दिने तयारी सर्वोच्चले माग्यो लोकमानको सक्कल कागजपत्र
← वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्र सार्वजनिक (पूर्णपाठ)	राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र फर्काउने संकल्पसहित राप्रपाको घोषणापत्र सार्वजनिक →